इतिहासकै महँगो विश्वकप तर आयोजक रुस किन कमजोर ७ सय बिलियन खर्च गरेको महँगो विश्वकप तर आयोजक रुस किन कमजोर ? » खबरहरुको एउटै केन्द्र
इतिहासकै महँगो विश्वकप तर आयोजक रुस किन कमजोर ७ सय बिलियन खर्च गरेको महँगो विश्वकप तर आयोजक रुस किन कमजोर ?
बिहीबार, जेष्ठ ३१, २०७५ ११:५६ मा प्रकाशित !
एजेन्सी – रूसले आठ वर्षको समय र ७ सय बिलियन रुबल खर्च गरेर विश्वकप आयोजना गर्दैछ । आयोजनाका हिसाबले यो ८८ वर्षे विश्वकप इतिहासकै सर्वाधिक महँगो प्रतियोगिता हुनेछ । नयाँ पूर्वाधार र नयाँ विकास मार्फत रुसले आफ्नो आधुनिकताको चिनारी गर्वसाथ विश्वमाझ गराउँदैछ । तर दुग्भार्य यति नै बेला रुसको फुटबल टिम खराब समयबाट गुज्रिरहेको छ । फिफा वरियतालाई आधार मान्दा विश्वकपमा सहभागी ३२ टोलीमध्ये आयोजक रुस सबैभन्दा कमजोर टोली हो । रुस फिफा वरियताको ७०औं स्थानमा छ ।
PREVIOUS POST Previous post: प्रतिनिधिसभा बैठक : विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी (लाइभ)
NEXT POST Next post: मस्कोको लुझनिकी रंगशालामा विश्व फुटबलको यसरी हुदैछ औपचारिक उद्घाटन
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, जेष्ठ ३१, २०७५ ११:५६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, जेष्ठ ३१, २०७५ ११:५६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, जेष्ठ ३१, २०७५ ११:५६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, जेष्ठ ३१, २०७५ ११:५६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, जेष्ठ ३१, २०७५ ११:५६